UNYANGO LWASEKHAYA LWEFEVER-UNGAWUSUSA NJANI UMKHUHLANE - INGQELE KUNYE NEFLU YEXESHA LE2020
Iindlela ezi-8 zokuphelisa iFever ASAP, ngokukaGqirha
Eyona / Ingqele Kunye Neflu Yexesha Le2020
Ingqele Kunye Neflu Yexesha Le2020
Eli nqaku lahlaziywa kwezonyango nguRaj Dasgupta, MD, unjingalwazi oncedisayo kunyango kunye nelungu leBhodi yoPhononongo lwezoNyango, ngo-Okthobha 8, 2019.
Nangona ifiva iyintlungu yokoqobo ukujongana nayo, bacinge njengenkqubo yokulumkisa kwangoko yomzimba wakho. Uninzi lwefiva lubangelwa zizifo , Umzimba wakho ubamba ubushushu ngokuhambisa igazi kumphezulu wolusu lwakho uye kumbindi womzimba wakho endaweni yoko.
Nangona kunjalo, umzimba awuphulukani namandla okulawula ubushushu ngexesha lomkhuhlane. Ilawula ubushushu bomzimba kwindawo ephezulu, uyachaza uRaj Dasgupta, MD, unjingalwazi oncedisayo kunyango lwezonyango IYunivesithi yaseSouthern California Keck School of Medicine . Xa umkhuhlane ukhula, ubushushu bomzimba bukhuphukela kwindawo ephezulu.
Ngelixa I-98.6 ° F ithathwa njengobushushu obuqhelekileyo , ezinokuguquguquka. Wonke umntu uneqondo lakhe lobushushu eliqhelekileyo, elinyuka linyuke lize yonke imihla. Ukutya ukutya, ukunxiba iimpahla ezigugileyo, ukonwaba ngokwenene, kunye nokuzilolonga ngamandla kunako konke ukukwenza ubushushu bomzimba wakho. Kodwa ukuba ubushushu bakho bubetha i-100 ° F, yithathe njengomkhuhlane omncinci, utsho UNita Parikh, MD , oyingcali yamayeza angaphakathi kunye noGqirha abaKhathalela uLatham, eNew York.
Nje ukuba umkhuhlane uphuke, indawo ebekiweyo ibuyela esiqhelweni, kwaye iqondo lakho lobushushu liqala ukwehla ngokususa ubushushu ngokubila nangokwehlisa imithambo yegazi kulusu. Umzimba womntu ulawula ubushushu ngokugcina ulungelelwano phakathi kobushushu kunye nelahleko yobushushu, utshilo uGqirha Dasgupta. Inkqubo yakho yolawulo lobushushu ifana ngakumbi nokusebenza kwesithando somlilo sasekhaya, ngokuchasene nomsebenzi wesixhobo sokupholisa umoya.
Nokuba ukhona ejongene nomkhuhlane , ebandayo , ukukrala kwemiphunga , okanye imeko yokuvuvukala , funda ukuze ufumanise amayeza ekhaya anokukunceda uzive ungcono ngelixa umzimba wakho uzama ukufumana ibhalansi.
Okokuqala, uxelela njani ukuba unefiva
Idyetha emhlophe yokuFunda okuDijithali ngokukhawulezaamazon.com THENGA NGOKU
Ukufumanisa ukuba unefiva, kufuneka uthathe ubushushu usebenzisa ithemometha. Linda ubuncinci imizuzu eli-15 emva kokutya okanye ukusela nantoni na, ukutshaya, okanye ukuhlamba ngamanzi ashushu ngaphambi kokufunda ngomlomo, kuba oku kunokubutshintsha ubushushu bomlomo kwaye kubangele ukufundwa okungachanekanga. Emva koko, landela la manyathelo:
Phambi kokusebenzisa ithemometha, yibambe ngesiphelo (hayi ibhalbhu) kwaye uyihlukuhle ngesiquphe ngokukhawuleza esihlahleni de umbala wedayi ube ngaphantsi ko-96 ° F. Ukuba ukhathazekile ngokuwisa nokwaphula ithemometha, yenza oku ngaphezulu kwebhedi, uStephen N. Rosenberg, MD, umbhali we Incwadi kaJohnson & Johnson yoNcedo lokuQala .
Beka ithemometha yedijithali okanye yeglasi phantsi kolwimi lwakho kwenye yeepokotho ezikulo naliphi na icala lomlomo wakho kunangaphambili. Ezi pokotho zisondele kwimithambo yegazi ebonisa ubushushu obuphambili bomzimba.
Bamba ithemometha endaweni ngemilebe yakho, hayi ngamazinyo akho. Ukuphefumla ngeempumlo zakho endaweni yomlomo wakho ukuze iqondo lobushushu kwigumbi lingachaphazeli ukufunda.
Shiya ithemometha endaweni yayo okwemizuzu emi-3 (ezinye iingcali zithanda imizuzu emi-5 ukuya kweli-7). Emva kokusetyenziswa, hlamba ithemometha emanzini apholileyo, anesepha okanye wosule ngokurabha utywala. Ungaze usebenzise amanzi ashushu okanye uwagcine kufutshane nobushushu.
1. Okokuqala, yilinde.
Ukuba unayo ifiva, khumbula oku: IFiva ngokwayo ayisosifo-yinto uphawu enye. Ke, ubukhulu becala, ukhuseleko lwendalo lomzimba wakho lunokunciphisa isigulo ngokuphendula ngokukhawuleza kwaye sandise amandla e-antibiotics. Ezi nkqubo zendalo kufuneka zilinganiswe nokungonwabi okubandakanyekileyo ekunganyangeni umkhuhlane nje kancinci nokuwuyeka uqhubeke, utshilo uGqirha Rosenberg.
Xa ushushu, umzimba wakho uyabila ukuze uphole. Kodwa ukuba uphulukana namanzi amaninzi — njengokuba usenokuphulukana nomkhuhlane omkhulu — umzimba wakho ucima imibhobho ukukhupha ukulahleka kwamanzi, nto leyo eyenza kubenzima kuwe ukumelana nomkhuhlane. Ukuziphatha kweli bali: Sela. Ukongeza emanzini acocekileyo, iingcali zithanda oku kulandelayo:
Ijusi yamanzi: Ijusi ethe nkqo, nokuba isondlo kangakanani na, ijolise kakhulu ekuseleni nakuphi na ubungakanani xa unefiva kwaye inokubangela urhudo . Soloko uthambisa isiqhamo se-100 seepesenti okanye isiselo semifuno ngenxalenye yejusi enye ukuya kwicandelo elinye lamanzi ukwenza ukuba kubelula emzimbeni wakho ukufunxa.
I-organic yeLinden Blossom ItiIndalo elungileyo amazon.com$ 4.99 ngexabiso THENGA NGOKU
Iti yeLinden: Nangona nayiphi na iti iya kubonelela ngolwelo olufunekayo , ezininzi zilungele umkhuhlane, utsho IGale Maleskey, i-MS, i-RD . Indibaniselwano enye ayithandayo yi-thyme (antibacterial), iintyatyambo ze-linden (ezikhuthaza ukubila), kunye neentyatyambo ze-chamomile (zinciphisa ukudumba). I-1 yethipuni yomxube kwi-1 indebe yamanzi asanda kubiliswa imizuzu emi-5. Ukuxinwa kunye nokusela okufudumeleyo amaxesha amaninzi ngemini. Iti yeLinden kukodwa kulungile, utsho, kwaye kunokubangela ukubila ukuba kuqhekeze umkhuhlane. Sebenzisa icephe elingu-1 leentyatyambo kwikomityi enye yamanzi abilayo imizuzu emihlanu. Ukuxinana kunye nokusela kushushu rhoqo.
Iti yeWillow bark: Le bark ityebile kwii-salicylates (iikhompawundi ezinxulumene ne-aspirin) kwaye ithathwa njengeyeza lendalo lomkhuhlane, utshilo uMaleskey. Phisa iti kwaye usele ngeedosi ezincinci.
3. Khetha umkhenkce.
Ukuba ucatshukiswa kakhulu kukusela, ungancancisa umkhenkce. Ukwahlukahluka, qkraza ijusi yeziqhamo exutywe kwitreyi yomkhenkce.
4. Pholisa phantsi ngokucinezela okumanzi.
Ukucinezelwa okumanzi kunceda ukunciphisa ubushushu bomzimba wakho. Ngelishwa, ukushushu, ukunyakama okufumileyo nako ukwenza lo msebenzi. Ukuba uqala ukuziva ushushu ngokungathandekiyo, susa ezo zixineneyo kwaye uzisebenzise ezipholileyo ebunzi, ezihlahleni, kunye namathole. Gcina umzimba wonke ugqunyiwe. Ukuba umkhuhlane uphakama ngaphezulu kwe-103 ° F, sukusebenzisa uxinzelelo olushushu kwaphela. Endaweni yoko, sebenzisa ezipholileyo ukuthintela umkhuhlane ekubeni ungonyuki. Batshintshe njengoko beshushu kubushushu bomzimba kwaye baqhubeke de kube sehla umkhuhlane.
5. ... okanye uzama ukusiphula endaweni yoko.
Umphunga unefuthe lokupholisa kubushushu bomzimba. Zama ukubamba amanzi apholileyo esikhumbeni ukunceda ukutshabalalisa ubushushu obugqithisileyo, utshilo uMary Ann Pane, RN, ugqirha ongumongikazi ePhiladelphia. Nangona unokuwuthambisa umzimba uphela, utshilo, nikela ingqalelo ngakumbi kumachaphaza apho ubukhulu becala bukhulu khona, njengamakhwapha kunye nendawo ye-groin. Ukukhupha isiponji kwaye usule icandelo elinye ngexesha, ugcine wonke umzimba ugqunyiwe. Ukushisa komzimba kuya kuphuma umswakama kwaye kupholise ulusu.
6. Yenza i-OTC yokunciphisa iintlungu.
I-Advil Pain Reliever / Fever Reducer Amacwecwe aDibeneyoamazon.com$ 10.99 ngexabiso THENGA NGOKU
Ukuba awonwabanga kakhulu, thatha isiqabu seentlungu ezingaphaya kwekhawunta. Kubantu abadala, Iasprini , acetaminophen , okanye ibuprofen ingathathwa ngokwemikhombandlela yephakheji. Uncedo lwe-acetaminophen kunye ne-ibuprofen ngaphezulu kwe-aspirin kukuba bambalwa abantu abafumana iziphumo ebezingalindelekanga.
Ke yeyiphi ekufuneka uyithathile? Zonke ziyasebenza, kodwa ezinye zisebenza ngcono kwizigulo ezithile. Umzekelo, i-aspirin kunye ne-ibuprofen zii-anti-inflammatory (NSAIDs) eziqhelekileyo, ngoko ke ziyasebenza ekunciphiseni iintlungu zemisipha nangokudumba. I-Acetaminophen iyacetyiswa ukuba unobuzaza besisu okanye uxabisa i-aspirin. Ayisebenzi kunye nee-NSAID zokudumba kunye iintlungu zemisipha ; Nangona kunjalo, sisiyobisi esikhuselekileyo sokusetyenziswa kwaye sineziphumo ebezingalindelekanga ezincinci, ukuba nje sithathwa kumthamo ofanelekileyo.
7. Nxiba indawo.
Sebenzisa ukuqonda ngokuya kufikelela kwimpahla kunye neengubo, utsho uPane. Ukuba ushushu kakhulu, thatha izigqubuthelo ezingaphezulu kunye neempahla ukuze ubushushu bomzimba bunyukele emoyeni. Kodwa ukuba upholile, yinyanda kude kube ukhululekile.
Thatha ixesha lakho usitya.
Musa ukukhathazeka ngokuba ufanele bondle umkhuhlane okanye indlala -Ukuyirhaxisa. Uninzi lwabantu alufuni kutya xa benomkhuhlane, ke into ebalulekileyo ngamanzi, utshilo uMaleskey. Emva kokuba umnqweno wakho uqala ukubuyela, yidla oko kukukhangayo. I-toast, amaqanda aqhekezayo, isobho senkukhu, kunye ne-vanilla pudding zonke ziyehla ngokulula njengenxalenye yokuchacha kwakho. (Ukuphefumlelwa okungakumbi, nantsi i- Okona kutya kutyiwa xa ugula .)
Ufanele umbone nini ugqirha malunga nomkhuhlane wakho?
Amaqondo obushushu ayi-102 ° F okanye aphezulu anganobuzaza, ngakumbi ukuba uziva ugula nezinye iimpawu. Abantu abadala abanezifo ezinganyangekiyo, ezinjengentliziyo okanye isifo sokuphefumla, abanakho ukumelana nefiva ephezulu ixesha elide. Yiya kugqirha wakho ukuba ufumana enye okanye ezingaphezulu kwezi zilandelayo, ngokweengcali zethu kunye Amaziko oLawulo noThintelo lwezifo :
Intloko ebuhlungu ngentamo elukhuni
Ukukhohlela kakhulu okanye ukugabha
Intlungu ithatha umoya ophefumlelweyo okanye ubunzima bokuphefumla
Ukutyumka okanye ukopha okungachazwanga
Ukukhutshwa okumthubi okanye okuluhlaza okwimpumlo
Amaqondo obushushu aphezulu kune-101 ° F ahlala ngaphezulu kweentsuku ezi-2 okanye asilele ukuphendula ubuncinci kunyango
Ubushushu bungaphezulu kwe-103 ° F phantsi kwayo nayiphi na imeko
Eyona flip ilungileyo kwi-fasciitis yesityalo
Inombolo yeengelosi enentsingiselo eyi-111
I-111 intsingiselo yokomoya
indlela yokuphelisa iimpukane ezindlwini
umyalezo weengelosi 444